यी हुन्, जीवनमा सधै गोप्य राख्नुपर्ने ७ कुराहरु ! - Internet Khabar
October 1, 2018 Internet Khabar
एजेन्सी, असोज १५ । पूर्वीय दर्शनमा जीवनमा सँधै गोप्य राख्नु पर्ने केही कुराको चर्चा गरिएको छ । कतिपय कुराहरु हामीले अरुलाई सेयर नगर्नु नै राम्रो हुन्छ । हामीले यहा जीवनमा सदैव गोप्य राख्नुपर्ने केही कुराहरुको बारेमा चर्चा गरेका छौं ।
जीवनमा यौन सम्बन्धको विषयमा कसैलाई पनि नभन्नुस् ।कुनै स्त्री तथा पुरुषबीचको यौनिक क्रियाकलाप अरुसँग भनेर मजा लिने कुरा होइन । तपाइँले यौन क्रिडाका कुरा अरुलाई भन्न थाल्नु भो नकारात्मक परिणाम ब्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ ।
२. घर परिवारको झगडा
जीवनमा तपाइँलाई परेको आर्थिक नोक्शानीको विषयमा कसैलाई पनि भन्न हुँदैन् । मानिसहरुले तपाइँको धन हानी हुँदा तपाइँसँग भएको धनबारे जानकारी पाउने मात्र होइन हानी भएका कारण तपाइँबाट टाढिने समेत खतरा समेत हुन्छ ।
जीवनमा कसैलाई केही कुरा दिइएको छ भने त्यो विषयमा अरुलाई भन्नु हुँदैन । दान धर्मको विषयमा अरुलाई भन्नु भो भने यसको फल प्राप्त हुँदैन ।
गुरुले दिएको मन्त्रलाई पनि गोप्य राख्न पर्ने विषय मानिन्छ । मन्त्र कसैलाई पनि भन्नु हुँदैन किन भने मन्त्रमा शक्ति हुन्छ ।
आफू अपमानित भएको कुरा कसैलाई भन्नु हुँदैन । अपमानित भएको विषय अरुलाई भनियो भने तपाइँको मजाक बनाएर खिल्ली उडाउन सक्छन् ।
पद प्रतिष्ठा प्राप्त भएपछि मानिसहरु मात्तिने हुन्छन् । तर पद र प्रतिष्ठको विषयमा सके सम्म गोप्यता कायम गर्नुस् । यी ७ कुरा जीवनमा सँधै गोप्य राख्नुस् ।
आजको राशिफलः मिति २०७५ साल असोज १५ गते सोमबार
पोखरामा भेटिए सबैलाई चकित पार्ने अनौठा मानिस, शरीरमा २ सय ६ देशको सिक्का ! (भिडियोसहित)
October 29, 2017 October 16, 2018
January 28, 2018 June 22, 2018
हिन्दू देवीदेवताको रंग कस्तो हुन्छ ?
December 17, 2017 July 28, 2018